Singapore sy Hong Kong ny manaraka manana Apple Watch Series 3 LTE misy | Avy amin'ny mac aho
Manohy manitatra i Apple Apple Watch Series 3 LTE Ary ireo famantaranandro ireo dia mamela anao hampiasa ny akanjo azo tratrarina tsy azo tratrarina na ny fampifanarahana ny iPhone dia tsy misy amin'ny firenena rehetra ankehitriny.
Anisan'ny tompon'andraikitra amin'ity fanitarana voafetra ity ny Apple tenany sy ireo mpandraharaha isaky ny firenena amidiny ny vokariny. Tranga hafahafa dia ny an'ny firenena manodidina antsika, France, izay manana ny Apple Watch Series 3 LTE miaraka amin'i Orange ary kosa tsy misy eto. Ho an'ireo firenena tsara vintana misy ireo maodely ireo Hanatevin-daharana azy ireo i Singapore sy Hong Kong.
Hatramin'ny andro nanombohan'ny 22 septambra 2017 lasa teo, ny Apple Watch LTE dia misy any Etazonia, France ary United Kingdom, ankehitriny no fiandohan'ny Famandrihan-toerana amin'ny 2 Febroary ho avy izao any Singapore sy Hong Kong. Ny kaomandy voalohany dia hahatratra ny mpanjifa herinandro taty aoriana, tombanana ho amin'ny 9 feb.
Ity dia zavatra sarotra ho takatry ny maro amintsika satria ny Apple Watch no mividy dia ity, ny Series 3 miaraka amin'ny LTE, fa Apple dia tsy maintsy manohy mifampiraharaha amin'ireo mpandraharaha momba ny fanitarana azy any amin'ny firenena hafa ary toa miadana kokoa noho ny tiantsika ny fizotrany. Raha fintinina dia tsy maintsy miandry foana isika ary na dia marina aza fa ny safidin'ny Apple Watch Series 3 tsy misy LTE dia fividianana tsara, mino aho fa ny safidy miaraka amin'ny mety hahaleo tena kokoa ny iPhone no safidy amin'ity. raharaha Fotoana hiandrasana hatrany ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Singapore sy Hong Kong manaraka ny Apple Watch Series 3 LTE no misy
Ny EU dia mametraka lamandy amin'ny Qualcomm mitentina 997 tapitrisa euro